Maka: khangela elebhu
Kutshanje, bendindwendwele umthengisi wasekhaya. Uneshishini elimangalisayo kunye nendawo anokuyila kuyo, alungise kwaye athengise izinto ezithengiswayo ukusuka kwindawo aqala kuyo. Izibonelelo zakhe zezinye zezona zibalaseleyo elizweni, kwaye wonke umntu kubasebenzi bakhe unetalente ekhethekileyo, uqeqeshiwe kwaye uqinisekisiwe. Umceli mngeni wakhe kukuba ukuthengisa kwakhe ngokwesiko akutsaleli ukugcwala kweenyawo ngendlela awayeqhele ngayo. Ubukho bakhe kwi-Intanethi ikakhulu yincwadana. Siya kuyo